पुरानो युग बितेको छ, र नयाँ युग आएको छ। एक वर्षपछि अर्को वर्ष र एक दिन पछि अर्को दिन, परमेश्‍वरले धेरै काम गर्नुभएको छ। उहाँ यस संसारमा आउनुभयो र त्यसपछि प्रस्थान गर्नुभयो। यो चक्र आफै धेरै पुस्ताहरू भएर दोहोरिएको छ। आज, पहिले जस्तै परमेश्‍वरले उहाँले गर्नै पर्ने काम निरन्तर गर्नुहुन्छ, त्यो काम जुन उहाँले पूरा गर्न अझ पनि बाँकी छ, किनकी आजका दिनसम्म उहाँ विश्राममा प्रवेश गर्न बाँकी नै छ। सृष्टिको समयदेखि आजका दिनसम्म, परमेश्‍वरले धेरै काम गर्नु भएको छ। तर के तँलाई आज परमेश्‍वरले पहिलेभन्दा अझ धेरै काम गर्नुहुन्छ, र उहाँको कामको परिमाण पहिलेको भन्दा अझ धेरै छ भन्ने थाहा थियो। त्यसै कारणले म भन्छु कि परमेश्‍वरले मानिसहरू माझमा महान् कुरा गर्नुभएको छ। परमेश्‍वरका सबै काम अति नै महत्वपूर्ण छन् चाहे त्यो मानिसको लागि होस् वा परमेश्‍वरको लागि होस्, किनकि उहाँको कामको हरेक बिषय मानिससँग सम्बन्धित छ।
परमेश्‍वरको कामलाई न त देख्न सकिन्छ न त लिन सकिन्छ—संसारले साह्रै थोरै मात्र देखेको छ—कसरी त्यो महान् कुनै कुरा हुन सक्छ? कस्तो प्रकारको चीजलाई मात्र महान् मानिन सकिन्थ्यो? निश्चय नै, कसैले पनि इन्कार गर्न सक्दैन कि परमेश्‍वरले जे काम गर्नुहुन्छ, यो महान् मान्न सकिन्छ, तर म किन परमेश्‍वरले यो दिनमा परमेश्‍वरले गर्नुहुने कामको बारेमा भन्छु। जब म भन्छु कि परमेश्‍वरले महान् कुरा गर्नुभएको छ, यसले निःसन्देह मानिसले बुझ्नै बाँकी धेरै रहस्यहरूलाई समावेश गर्छ। तिनीहरूको बारेमा अब कुरा गरौं।
येशू उहाँको अस्तित्वलाई सहन नसक्ने एउटा डुँडमा त्यो युगमा जन्मिनु भएको थियो, तर त्यसो हुँदा पनि, संसार उहाँको मार्गमा उभिन सकेन, र उहाँ परमेश्‍वरको हेरचाहमा मानिसहरू माझ तेत्तीस वर्ष जिउनुभयो। जीवनका ती धेरै वर्षहरूमा उहाँले संसारको कटुता अनुभव गर्नुभयो र पृथ्वीमा दुःखको जीवन अनुभव गर्नुभयो। सबै मानवजातिलाई छुट्कारा दिलाउन उहाँले क्रूसमा टाँगिने महान् अभिभारा बहन गर्नुभयो। उहाँले शैतानको राज्य-क्षेत्रमा जिइरहेका सबै पापीहरूलाई छुट्कारा दिनुभयो, र अन्त्यमा, उहाँको पुनरुत्थित शरीर उहाँको आराम गर्ने ठाउँमा फर्कियो। अब परमेश्‍वरको नयाँ काम शुरू भएको छ, र यो नयाँ युगको शुरूवात पनि हो। परमेश्‍वरले छुट्कारा पाएकाहरूलाई मुक्तिको उहाँको नयाँ काम शुरू गर्न उहाँको घरमा तिनीहरूलाई ल्याउनुहुन्छ। यो समय, मुक्तिको काम बितेको समयको भन्दा बढी श्रमसाध्य छ। मानिसलाई आफै परिवर्तन हुने गराउन मानिसमा काम गरिरहनुहुने पवित्र आत्मा हुनुहुने छैन, न त यो काम गर्न मानिसहरू माझ देखा परिरहेको येशूको शरीर नै हुनेछ, र कमसेकम यो काम अन्य माध्यमद्वारा गरिनेछ। बरु, यो काम गरिरहेको र यसलाई निर्देशन दिइरहेको देहधारी परमेश्‍वर उहाँ आफै हुनुहुनेछ। उहाँले यसलाई यसरी नयाँ काममा मानिसलाई डोर्याउनको लागि गर्नुहुन्छ। के यो महान् कुरा होइन? परमेश्‍वरले यो काम मानवताको अंशमार्फत वा भविष्यवाणीहरूको माध्यमबाट गर्नुहुन्न; बरु, परमेश्‍वर आफैले यो गर्नुहुन्छ। कसैले भन्लान् कि यो महान् कुरा होइन, र यसले मानिसमा परमानन्द ल्याउन सक्दैन। तर म तँलाई भन्नेछु कि परमेश्‍वरको काम यो मात्र होइन, तर यो भन्दा धेरै महान् र धैरै बढी केही छ।
परमेश्‍वरको काम यस्तो काम हो जसलाई तँ बुझ्न सक्दैनस्। यदि तँ न त तेरो छनोट सही छ कि छैन पूर्ण रूपमा बुझ्न सक्छस् न त तँ परमेश्‍वरको काम सफल हुन्छ कि भन्ने थाहा पाउन सक्छस्, त्यसो हो भने किन तेरो भाग्यको परीक्षा नगर्ने र हेर्ने कि के यो साधारण मानिस तेरो लागि ठूलो सहयोग हुन सक्छ कि सक्दैन, र के परमेश्‍वरले साँच्चिकै महान् काम गर्नुभएको छ कि छैन? यद्यपि, मैले तँलाई भन्नैपर्छ कि नोआको समयमा, मानिसहरू खाइरहेका र पिइरहेका, विवाह गरिरहेका र विवाहमा यति हदसम्म दिइरहेका थिए कि परमेश्‍वरको लागि साक्षी दिन असह्य थियो, त्यसैले आठ जनाको नोआको परिवार र सबै प्रकारका चराहरू र चौपायाहरूलाई मात्र छाडेर मानवजातिलाई नष्ट गर्न उहाँले विशाल जलप्रलय पठाउनुभयो। आखिरी दिनहरूमा, यद्यपि परमेश्‍वरद्वारा बचाएर राखिएकाहरू सबै अन्त्यसम्म उहाँप्रति बफादार रहेकाहरू थिए। हुन त दुवै युगहरू परमेश्‍वरलाई साक्षी दिन असह्य ठूलो भ्रष्टताका समय थिए, र दुवै युगहरूमा मानवजाति परमेश्‍वर उनीहरूको प्रभु हुनुहुन्थ्यो भन्ने इन्कार गर्न यति भ्रष्ट भए कि परमेश्‍वरले नोआको समयमा मानिसहरूलाई मात्र नष्ट गर्नुभयो। दुवै युगहरूमा मानवजातिले परमेश्‍वरलाई ठूलो दुःख दिए, तर पनि परमेश्‍वरले अहिलेसम्म आखिरी दिनहरूका मानिससँग धैर्य गर्नुभयो। किन हो यो? तिमीहरूले किन कहिल्यै आश्चर्य मानेनौ? यदि तिमीहरूलाई साँच्चिकै थाहा छैन भने, मलाई भन्न देऊ। आखिरी दिनहरूमा मानिसहरूलाई परमेश्‍वरले कृपा गर्न सक्नुको कारण उनीहरू नोआको समयका मानिसहरूभन्दा कम भ्रष्ट भएर होइन, अथवा उनीहरूले परमेश्‍वरलाई पश्चाताप देखाएको भएर होइन, आखिरी दिनहरूमा प्रविधि यति आधुनिक छ कि उनीहरूलाई परमेश्‍वर स्वयमले नष्ट गर्न सक्नुहुन्न भन्ने कुरा त परै छाडौं। बरु, यसको कारण यो हो कि परमेश्‍वरले मानिसहरूको एक समूहमा आखिरी दिनहरूमा गर्नु पर्ने काम छ, र यो काम परमेश्‍वर स्वयमले उहाँको देहधारणमा गर्ने चाहना राख्नु हुन्छ। अझ बढी, परमेश्‍वर उहाँको मुक्तिका पात्रहरू र उहाँको व्यवस्थापनको योजनाको फल बन्न यो समूहको एक भाग छान्ने, र ती मानिसहरूलाई अर्को युगमा ल्याउने चाहना राख्नुहुन्छ। त्यसैले, जे भए पनि, परमेश्‍वरले चुकाउनुभएको यो मूल्य पूर्ण रूपले उहाँको देहधारी शरीरले आखिरी दिनहरूमा गर्ने कामको तयारीको लागि हो। यो देहको कारणले तिमीहरू आजका दिनसम्म आइपुगेका छौ। परमेश्‍वर देहमा जिउनुहुने भएकाले तिमीहरूलाई जीवित रहने मौका छ। यो साधारण मानिसको कारणले यो सबै सौभाग्य प्राप्त भएको हो। यति मात्र होइन, तर अन्त्यमा, प्रत्येक राष्ट्रले यो साधारण मानिसलाई आराधना गर्नेछन्, साथै धन्यवाद दिनेछन् र यो महत्वहीन मानिसको आज्ञापालन गर्नेछन्, किनकि यो उहाँले ल्याउनुभएको सत्य, जीवन, र मार्ग हो जसले सबै मानवजातिलाई मुक्ति दिएको छ, परमेश्‍वर र मानिस बीचको द्वन्द्वलाई कम गरेको छ, उनीहरू बीचको दूरीलाई छोट्याएको छ र परमेश्‍वर र मानिसका बिचारहरू बीचको सम्बन्ध खुला गरेको छ। यो उहाँ नै हुनुहुन्छ जसले परमेश्‍वरको लागि अझ महान् महिमा प्राप्त गर्नुभएको छ। के यस किसिमको साधारण मानिस तेरो विश्‍वास र आराधनाको लागि अयोग्य छ? के यस किसिमको साधारण देह ख्रीष्ट भनिन अनुपयुक्त छ? के यस किसिमको साधारण मानिस मानिसहरूका माझ परमेश्‍वरको अभिव्यक्ति बन्न सक्दैन? के यस प्रकारको मानिस जसले मानवजातिलाई विपत्तिबाट जोगाएको छ, तिमीहरूको प्रेम र तिम्रो चाहना उहाँमा राख्न योग्य छैन? यदि तिमीहरूले उहाँको मुखबाट अभिव्यक्त सत्यहरू इन्कार गर्यौ र तिमीहरू माझ उहाँको अस्तित्व घृणा गर्यौ भने, त्यसपछि अन्त्यमा तिमीहरूको के हुनेछ?
आखिरी दिनहरूमा परमेश्‍वरका सबै काम यही साधारण मानिसद्वारा गरिन्छ। उहाँले सबै कुरा तँलाई प्रदान गर्नुहुनेछ, र त्यो भन्दा बढी, तँसँग सम्बन्धित सबै कुराको निर्णय गर्न उहाँ सक्षम हुनुहुनेछ। के यस प्रकारको मानिस तिमीहरूले उहाँ जस्तो हुनुपर्ने हो विश्‍वास गर्छौ त्यस्तो हुन सक्छ: यति सामान्य मानिस कि उल्लेख गर्न नै अयोग्य? के उहाँको सत्य तिमीहरूलाई पूर्णरूपमा विश्‍वस्त तुल्याउन पर्याप्त छैन? के उहाँका कामहरूको साक्षी तिमीहरूलाई पूर्णरूपमा विश्‍वस्त तुल्याउन पर्याप्त छैन? अथवा के उहाँले तिमीहरूलाई डोर्याउनु हुने त्यो बाटो तिमीहरूको लागि हिँड्न योग्य छैन? जब सबै भनिन्छ र गरिन्छ, त्यस्तो के छ जसले तिमीहरूलाई उहाँलाई घृणा गर्न र उहाँलाई टाढा फाल्न र उहाँलाई फराकिलो स्थान दिन लगाउँछ? यो यही मानिस हो जसले सत्य अभिव्यक्त गर्छ, यो यही मानिस हो जसले सत्य प्रदान गर्छ, र यो यही मानिस हो जसले तिमीहरूलाई पछ्याउने मार्ग दिन्छ। के यो हुन सक्छ कि तिमीहरू यी सत्यहरूभित्र परमेश्‍वरको कामका चिन्हहरू भेट्न अझसम्म पनि असक्षम छौ? येशूको कामविना, मानवजाति क्रूसबाट ओर्लन सक्ने थिएनन्, तर आजको देहधारण बिना, क्रूसबाट ओर्लिएकाहरूले कहिल्यै परमेश्‍वरको समर्थन प्राप्त गर्न वा नयाँ युगमा प्रवेश गर्न सक्ने थिएनन्। यो साधारण मानिसको आगमनविना, तिमीहरूले परमेश्‍वरको सही मुखाकृति देख्ने अवसर कहिल्यै पाउने थिएनौ, न त तिमीहरू योग्य नै हुने थियौ, किनकि तिमीहरू सबै धेरै पहिले नष्ट गरिसक्नु पर्ने पात्रहरू हौं। परमेश्‍वरको दोस्रो देहधारणको आगमनको कारणले, तिमीहरूलाई परमेश्‍वरले क्षमा दिनुभएको छ र तिमीहरूलाई कृपा देखाउनु भएको छ। यसका बावजुद, मैले तिमीहरूलाई अन्तिमतिर छोड्नै पर्ने वचनहरू अझै यी छन्ः यो साधारण मानिस, जो देहधारी परमेश्‍वर हुनुहुन्छ, तिमीहरूको लागि अति नै महत्वको हुनुहुन्छ। यो परमेश्‍वरले मानिसहरू माझ पहिले नै गरिसक्नु भएको महान् कुरा हो।
अर्को: धेरैलाई बोलाइन्छ, तर थोरैलाई चुनिन्छ